Cudurrada Cusub Ee Laga Qaado Taleefoonnada Casriga Ah Iyo Internet-ka - Daryeel Magazine
Cudurrada Cusub Ee Laga Qaado Taleefoonnada Casriga Ah Iyo Internet-ka
Taleefoonnada casriga ah iyo internet-ku waxay noqdeen qeyb ka mid ah nolosha casriga ah waxaana la arkay inay keenaan cudurro nafsaani ah, Qaar ka mid ah cudurradaan waa kuwo cusub oo dhawaan dunida kusoo kordhay.
Cudurkaan af Soomaali ahaan loo yaqaan “MEEYE TALEEFOONKAYGII” ayaa ka mid ah cudurrada cusub ee soo kordhay. Waana cabsi qofku uu ka qabo inuu taleefoonkiisa waayo.
Waa xaalad sababaysa inaad aaminto inaad qabto cudurrada aad ka a akhrisato internet-ka.
Waa cudur dadka ku sababa inay ka werweraan xidhiidhkooda saaxiibtinnimo iyo kooda gacal ee ay leeyihiin. Dadka qaba dhibaatadaan waxay maqlaan taleefoonkooda oo dhacaya, inkastoo aanu dhacayn
Khubaradu waxay sheegayaan in baraha baadhitaanka sida Google iwm ay qofka ka dhigaan doqon aan waxba hindisi karin. Waxay yareeyaan awoodda xafiditaanka maskaxda iyo adeegsiga caqliga waayo waxay maskaxdu rumaysanaysaa in jawaab kasta ay ka xigto hal Click waana arrin khatar ah.
Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta Liin Dhanaanta Oo Dawo Ka Ah Buurnida Iyo Xanuunada Laga Qaado Farsamada Internet ka Loo Maro Ee Wi-Fi Oo Looga Guurayo Mid Cusub Oo La Yiraahdo Li-Fi Cuntooyinka Laga Qaado Kansarka